Indlu ekhululekileyo yabucala enobuhlobo kubantwana kufutshane nolwandle
Ikhaya lakho kude nekhaya. Nokuba ulusapho okanye uhamba ngomsebenzi sicinga ukuba uya kukhululeka ngakumbi kwindlu yethu encinci esanda kulungiswa. Ngaphakathi sineendawo zokuhlala zesikhumba kunye nesifudumezi somthi esineTV ezi-2 kunye neencwadi zokufunda ngelixa ngaphandle komgangatho ongaphambili okanye ipatio engasemva ibonelela ngesithuba esiningi sokuphumla kunye nokuphumla. Kwabancinci sinento yokudlala, iincwadi kunye neyadi ebiyelwe ngokupheleleyo enendawo eninzi yokudlala.
Isidlo sakusasa selizwekazi ngentsasa yokuqala sinikezelwa kunye nekofu eninzi ye-French press, iti eluhlaza kunye neebhiskithi ze-oreo.
I-700m kuphela ukusuka kumzila wokuhamba oya kukusa kunxweme lwendawo kunye nebala lokudlala. Kukuhambo lwemizuzu emi-4 ukuya kwiSpirit of Tasmania Terminal kwaye ngaphantsi kwemizuzu eli-10 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseDevonport kunye neyure nje ukuya eCradle Mountain.
Kukho i-50' ye-smart TV eneChromecast ukuze ukwazi ukubukela zonke iinkqubo zeTV owuthandayo kunye neemuvi. Kukho igadi engasemva ekhuselekileyo, i-balcony enkulu, i-bbq. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, kubandakanywa nesipheki serayisi kunye ne-wok. Ukhetho lwemiqamelo lubonelelwa kwimiqamelo ecaba kunye nephakathi, imiqamelo yoqalo kunye nedunlopillo latex pillows. Intsiba phantsi i-doona kwi-Queen bed kunye neengubo zombane kwiibhedi ezizodwa. Ezinye izinto zokudlala zabantwana kunye nencwadi nazo zibonelelwe.
ibhedi elala umntu omnye eyi-1, umatrasi ompontshwayo oyi- 1, \_u00A0Ibhedi yomntwana eyi-1
Nceda uthumele umyalezo ukuba kukho into oyifunayo. Asikho kude ke singakwazi ukujikeleza ukubonelela ngoncedo ukuba uyalufuna.
Inombolo yomthetho: PA2021.0060